Bettý, Sylvia naLaura. Vakadzi vatatu vanouraya kwenguva nhatu | Zvazvino Zvinyorwa
Vakadzi vatatu vanouraya
Ndakangoverenga Betty, yazvino runyorwa nemunyori weIceland Arnaldur Indridason, rimwe zita rakakura reNordic mhosva yekuparwa. Yakagara mazuva matatu, asi ipfupi uye haitore nguva yakareba. Iyo yechipiri naIndridason iyo yandaverenga nekuti, kunyangwe ndaizvifarira Mukadzi wegreen, Handina kuda kufarira muongorori wake Erlendur Sveinson. Asi iyi yakanga yakabata pfungwa dzangu nekuda kwekuchinja kwenyaya yechinyakare iyo yakatanga kuburitswa muna 2003.
Icho chaicho chakatanhamara rukudzo kutsika dzinonyanyozivikanwa yemu noir pane chimiro che femme fatale. Mukuwedzera, ine zvakanaka kwazvo kubata kwekubiridzira (uye kuongorora kwemuverengi pane kwake kusarudzira). Izvo zvinokushamisa iwe pakati uye zvinokudzosera iwe kuchipo icho, kusvikira panguva iyoyo, iwe ungangodaro wakatenda kubva kuma50. Ndichiri kuverenga icho, akati wandei mareferensi. Avo Laura y Sylvia, ivo Vera caspary y Howard Kurumidza.
Con inobata yaDashiel Hammett kana Raymond Chandler, ino nganonyorwa haina chekuita nezveavo vakaita kuti Indridason ibudirire. Distills ese classicism zvimwe Noir North America zvese zviri mumutsara waro uye muchimiro uye zano.
Vane chete vatambi vakuru. Iyo wekutanga-munhu munyori, mupfumi muridzi wezvikepe zvekuredza, mubatsiri wake uye mukadzi wake anonyengera, Bettý asingadzivisike. Munyori anotaura nyaya yake ari mutirongo. Kuwa kwake mugehena kwakakonzerwa nechishuwo chisingamiswe, chishuwo uye kushushikana kweanonyengera Bettý. Zvese zvekutumirwa kwe Mhosva Yakakwana. Nekudaro, isu tinopinda kubvunzurudzwa kunoitwa kwaari uye kwakapindirwa nenyaya yekuti nei uye sei akazopedzisira ave mutirongo.
Kunyepa uye kukanganisa izvo zvinoumba a zano zvinoyerera nekukurumidza uye inopera nekusimbiswa kweiyo obsession iyo isinga (uye isati yave) inogoneka kupera. Bettý migove zvisinganzwisisike pasts zvakajairika na Fast's Sylvia uye simba rekuroya naLaura de Caspary.
Yakatumirwa mukati 1960, munyori weAmerica Howard Kurumidza (munyori we Spartacus) yaive ichiri pane yakasarudzika Anti-American Activities Committee blacklist yekubatana kwake neCommunist Party. Saka aifanira kushandisa zita rekunyepedzera re EV Cunningham kusaina chikamu chakanaka chebasa rake. Gare gare, izvo zvakasiyana zvekare zvinotakura zita rake chairo.
En Sylvia takasangana na Alan macklin, mutikitivha, inveterate muverengi uye aimbove mudzidzisi wenhoroondo, akashandiswa nemamirionea kuti awane mukadzi asinganzwisisike Iye wamunoziva chete zita rake, Sylvia. Bhuku renhetembo rakaburitswa nezvake uye nekutenda kwaari kwaachawana nhoroondo yakaoma yeakare. Macklin achamutsvaga parwendo zvichitevera tsoka shoma dzinosiiwa nemusikana kuburikidza nenyika.
Yakanyorwa na Vera caspary en 1942, uyu munyori wemanoveli, mitambo uye ekuratidzira akawana mukurumbira nemusoro uyu. Makore maviri gare gare Ini ndakawanawo nekusingaperi mu Kugadziriswa kwemafirimu de Otto Preminger, game Gene Tierney naDana Andrews sevanhu vaitungamira. Inoonekwa se yakasarudzika pakati pechinyakare zvemufirimu noir.
Pano isu tine Laura kuvhima, Chii nyama, kushinga uye kuda zvikuru, asi uya watakawana akafa pa carpet mumba yekutandarira. Zvichazova Varume vemuti avo vanoedza kujekesa kufa kwake kusinganzwisisike. Waldo lydeker, munyori eccentric aishuvira rudo rwaLaura; Shelby Carpenter, chikomba chakeuye Marc macpherson, mutikitivha uyo anoongorora nyaya iyi uye uyo, kufanana neevamwe vapfuura, achatera kutsinga iyo Laura anoshandisa pavari.
Chinhu chinonakidza, kuwedzera kune nhoroondo yayo, ndiko kushandiswa kwe akasiyana manzwi manzwi. Izvi zvinoshanduka kuziva zvese, zvichipinda mumifungo yevamwe vatambi uye nenguva dzavasipo. Waldo Lydecker, Mark McPherson kana Laura pachavo vari kutiratidza mazano ekugadzirisa dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Bettý, Sylvia naLaura. Vakadzi vatatu vanouraya kwenguva nhatu
Nzvimbo dzakanyorwa mabhuku ako aunofarira